ခြောက်သွေ့အက်ကွဲသောခြေဖဝါးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း & မှိုပိုးကူးစက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး Onychomycosis Paronychia Toe Fungus Gel - အခမဲ့ပို့ဆောင်ခြင်း၊ အခွန်မဆောင်ခြင်း | WoopShop®
ခြောက်သွေ့ကွဲအက်သောခြေဖဝါးကိုဂရုစိုက်ခြင်းနှင့်မှိုပိုးကူးစက်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသော Onychomycosis Paronychia Toe Fungus Gel
ခြောက်သွေ့ကွဲအက်သောခြေဖဝါးကိုဂရုစိုက်ခြင်းနှင့်မှိုပိုးကူးစက်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသော Onychomycosis Paronychia Toe Fungus Gel backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
အမျိုးအစား: Foot Cream
ပိုက်ကွန် WT: 15ml
ပိုက်ကွန် WT: 15g
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: Foot Cream
အကျိုးသက်ရောက်မှု: ဖန်းဂတ်စ်ကူးစက်ပိုး Onychomycosis Paronychia
ပစ္စည်းအမျိုးအစား: Fungus Cream Feet Care
အကျိုးကျေးဇူး: ရောင်ရမ်းမှုကိုသက်သာစေသော၊ ယားယံခြင်းကိုသက်သာစေသည်
အသုံးပြုနိုင်သောအသားအရေ - အသားအရေအမျိုးအစားအားလုံး
ထိရောက်မှု: ထိုးသွင်းပိုးသတ်ခြင်း၊ မှိုပိုးကူးစက်ခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ခြေထောက်ယားယံခြင်းကိုသက်သာစေသည်
ကွန်ယက် WT: 0.5 FL OZ / 15g
ကုန်ပစ္စည်းအင်္ဂါရပ်များ: ဆေးဖက်ဝင်အပင်များအနှစ်သာရနည်းပညာကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ဖော်မြူလာသည်နူးညံ့သည်၊ အရေပြားကိုမထိခိုက်စေဘဲပိုးသတ်ခြင်း၊ မှိုပိုးကူးစက်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးခြင်း၊ ရောင်ရမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်သောခြေများ၊ ယားယံခြင်းကိုသက်သာစေသည်၊ ခြေကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပေးခြင်း၊ ခြေ၏အခြေအနေကိုကောင်းမွန်စေသည်။
ငါဒီထုတ်ကုန်ကို Beth ရဲ့မာကျောပြီးအက်ကွဲနေတဲ့အရေပြားပေါ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ညကသုံးခဲ့တယ်။ အလုပ်စရန်လွယ်ကူသည်၊ အကောင်းဆုံးအရာသည်အချို့ထုတ်ကုန်များကဲ့သို့အနံ့မကောင်းပါ။ အလွန်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ပုံရသည်။
ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ crack cream များကိုသုံးခဲ့ပြီးဤမုန့်မရမချင်းဘာမျှမကူညီခဲ့ပါ။ ပထမညပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏ဒေါက်ဖိနပ်များသည်ပြီးပြည့်စုံလုနီးပါးဖြစ်ခဲ့သည်။ အံ့သြစရာကောင်းတာကငါဒေါက်ဖိနပ်တွေအ ၀ တ်တွေချွတ်ပြီးအဆိုးဆုံးအချိန်မှာနွေရာသီမှာနေ့တိုင်းသုံးခဲ့တယ်။ ဒီမုန့်ကအသက်ကိုကယ်တယ်။
ငါသုတေသနလုပ်လေ့မရှိပေမယ့်ဒီမုန့်ကအံ့သြစရာကောင်းတယ်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပတ်ကငါ့ခြေဖဝါးများနှင့်ခြေသလုံးနှစ်ဖက်၌ထူသောအရေခွံတစ်ခုရှိသည်၊ နာကျင်ပြီးအက်ကွဲနေသည်။ စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ငါဒါကိုအမိန့်ပေးတယ်။ တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်အများအပြားလိမ်းပြီး ၅ ရက်အကြာတွင်ခြောက်သွေ့သောအသားအရည်တစ်ခုသာကျန်သည်၊ အက်ကွဲကြောင်းများပျောက်သွားသည်၊ နာကျင်မှုပျောက်သွားပြီးကျွန်ုပ်တွင် ၃/၄ ခန့်သာကျန်တော့သည်။ ငါ့ခြေထောက်တွေပျော့ပျောင်းပြီးခြောက်သွေ့တဲ့အသားအရေကိုဘယ်တော့မှပြန်မသွားအောင်ငါနေ့တိုင်းဆက်သုံးလိမ့်မယ်။
оздорово! ниразунепользоваласькремомдляногзачетыредняипочувствовалатакуюазницу! евероятный! евосходноиискреннекуплюснова။ онедорого, нонемногопомогает Улучшилосьсостояниеногтейикутикулы။